ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ - ရိပ်မိခံစားနေရသောသရုပ်မှန်၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်နေသည်
Doi: 10.1177 / 0093650210362464 ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန ဇြန္လ 2010 လေယာဉ်ခရီးစဉ်။ 37 အဘယ်သူမျှမ။3375-399
Jochen ပတေရုသအမ်စတာဒမ်၏ -University, နယ်သာလန်, [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Patti အမ် Valkenburgအမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်, နယ်သာလန်, [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
သုတေသနအကြိမ်ကြိမ်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း (SEIM) မှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေအကြားတစ်ဦး link ကိုသရုပ်ပြခဲ့သော်လည်း, ဒီအသင်းအဖွဲ့အခြေခံသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်။ ပိုများသောအထူးသ, လေ့လာမှုများရိပ်မိသရုပ်မှန်တစ်ဖျန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍမှထောက်ပြကြပေမယ့်ပြည်တွင်းခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားပျောက်နေသည်။
ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရန်, စာရေးဆရာများအကြားသုံးလှိုင်း panel ကိုလေ့လာမှုကနေဒေတာတွေကိုအသုံးပြုသော 959 ဒတျချြဆယ်ကျော်သက်ကလေးs ကို။ သူတို့ကနှစ်ခု SEIM- လူမှုရေးသရုပ်မှန်များရိပ်မိသရုပ်မှန်၏အတိုင်းအတာများနှင့် utility ကို-mediated ရှိမရှိလိင် (ဆိုလိုသည်မှာအဖြစ်အဓိကအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပေါ့ပေါ့ထက်ချစ်ခင်နှင့်ဆက်စပ်လိင်၏အယူအဆ) ဆီသို့မြီးကောင်ပေါက် '' ဆာပသဘောထားတွေအပေါ် SEIM များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်ပြသ SEIM ၏ပိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုရိပ်မိလူမှုရေးသရုပ်မှန်နှင့် SEIM များ၏ရိပ်မိ utility ကိုနှစ်ဦးစလုံးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အလှည့်မှာတော့အဲဒီနှစ်ခုသဘောထားအမြင်လိင်ဆီသို့ပိုပြီးဆာပသဘောထားတွေမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ပြောင်းပြန်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မျှသက်သေအထောက်အထားများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
လူမှုရေးသရုပ်မှန်နှင့် utility ကို: ထို့အပြင်ပေတရုနှင့် Valkenburg (2010) ရိပ်မိသရုပ်မှန်နှစ်ခုအတိုင်းအတာဖြေရှင်းရန် 959 ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်အကြားသုံးလမ်း panel ကိုလေ့လာမှုကနေဒေတာတွေကိုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ "အဖြစ်လူမှုရေးသရုပ်မှန်သတ်မှတ်ထားတဲ့စာရေးဆရာများSEIM [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း] များ၏ content အစစ်အမှန်ကမ္ဘာလိင် "(စစ။ 376-77) အလားတူဖြစ်ရိပ်မိသောဖို့အတိုင်းအတာ နှင့် "ရာမြီးကောင်ပေါက်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်များ၏အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်အဖြစ် SEIM ရိပ်မိနှင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအဖြစ်သက်ဆိုင်သောမှအတိုင်းအတာ" (စ။ 377), အဖြစ် utility ကို။ သူတို့ကအစလိင်ဆီသို့ဆာပသဘောထားတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန်းစစ်, အကြောင်း, "အဖြစ်အဓိကအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပေါ့ပေါ့ထက်ချစ်ခင်နှင့်ဆက်စပ်လိင်၏အယူအဆ" ဖြစ်ပါတယ် (စ။ 375) ။ T ကမိမိအလေ့လာမှု, ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်ပိုပြီးမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိတွေ့ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုလူမှုသရုပ်မှန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတိုး၏ utility ကိုသူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်။ အဆိုပါလေ့လာမှုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းလူမှုရေးသရုပ်မှန်နှင့် utility ကို၏ သာ. မြီးကောင်ပေါက် '' သညာ, သာ. se ဆီသို့မိမိတို့၏ဆာပသဘောထားတွေအကြံပြုx.